Showing 181-200 of 404 items.
धरान पानवारीबाट एक बोरा हतियार सहित एक पक्राउ
धरान । धरान&ndash;६ पानवारीबाट प्रहरीले एक बोरा हतियार र मोटरसाइकल सहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।प्रहरीले चेकजाँच गर्ने क्रममा पानवारी चोक्टीबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रहरी स्रोतले दाबी गरेको छ । यस विषयमा थप छानविन भइरहेकोले �
2771 पटक पढिएको
श्रीमती हत्या गर्ने श्रीमान् पक्राउ
झापा । झापाको मेचीनगर नगरपालिका&ndash;१५ मा मंगलबार आफ्नै श्रीमतीलाई कोदालोको पासोले हानेर हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले १ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।मंगलबार विहान मेचिनगर&ndash;१५ का ३५ वर्षिय लखिन्द्र राजवंशीले घरायसी बिवाद हुँदा आफ्न�
खेदाई खेदाई पक्राउ गर्यो धरान प्रहरीले लागुऔषध कारोबारीलाई
धरान । इलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मंगलबार धरानको सेउती खोलाबाट लागुऔषध कारोबारीलाई खेदाएर पक्राउ गरेको छ । गोप्य सूचनाको आधारमा लागुऔषध कारोबारीलाई पक्रन हिडेको टोलीले धरानबाट तल्लो पानवारी जाने सड�
1931 पटक पढिएको
पथरी र सुनबर्षीको अफिम खेती प्रहरीद्वारा नष्ट
पथरी/ मोरङ प्रहरीको सक्रियतामा मोरङको पथरीशनिश्चरे र सुनबर्षी नगरपालिकामा सोमबार अफिम खेती नष्ट गरिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय पथरी र रंगेलीको संयुक्त टोलीले पथरीशनिश्चरे र सुनबर्षी नगरपालिकाको सिमा क्षेत्रको करिब १ कट्�
धरानकाे गीता मन्दिरबाट २ किलो गाँजा सहित पक्राउ
धरान । सुनसरीको धरान उप-महानगरपालिका-१२ गिता मन्दिरबाट प्रहरीले लागूऔषध गाँजा सहित २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय धरान र ईटहरीबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले २ किलो गाँजा सहित धनकुटा नगरपालिका-१ बस्ने बर्ष �
गोरु काट्दै गरेको अवस्थामा बराहक्षेत्रबाट बावु-छोरा पक्राउ
धरान । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका-७ बाङगेमा सोमवार प्रहरीले गोरु (बाच्छो) काटेर भाग लगाउँदै गरेको अवस्थामा बावु-छोरालाई पक्राउ गरेको छ । दिउँसो १२ बजे सोही स्थान बस्ने धन बहादुर तामाङको घरमा अन्दाजी ६० किलोको गोरु (बाच्छो) �
लागूऔषध सहित धरानका दुई युवक पक्राउ
मोरङ । प्रहरीले मोरङको विराटनगर महानगरपालिका&ndash;१५ बाट लागूऔषधसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।पक्राउ पर्नेमा सुनसरी धरान उप&ndash;महानगरपालिका&ndash;१३ का २२ वर्षीय दिनेश रोक्का र धरान&ndash;१६ का २२ वर्षीय गोविन्द मगर रहेका छन् । लागूऔष�
1489 पटक पढिएको
घरभित्र खाल्डो खनेर बोरामा राखेकाे सुन पक्राउ गर्याे प्रहरीले
काठमाडौं । कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिका&ndash;२, दशरथबस्तीमा ठूलो परिमाणमा सुन लुकाइएको सूचना पाएपछि बिहीबार दिउँसो अनुसन्धान अधिकारीहरुको एउटा टोली त्यसतर्फ हुइँकियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरको क्षेत्र भए पनि त्यह�
प्रकाशित मितिः फाल्गुन 3, 2075
हतकडी सहित कैलालीबाट भागेका दमाईलाई गाेली हानेर पक्राउ गरियाे
कैलाली । कैलाली जिल्ला अदालत परिसरबाट हत्कडीसहित फरार भएका दिल्प दमाईलाई प्रहरीले गोली हानेर पक्राउ गरेको छ । बलात्कारको अभियोगमा गत सोमबार पक्राउ परेका लम्कीचुहा नगरपालिकाका २३ वर्षका दमाईलाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत �
लागूऔषध सहित इटहरीबाट २ जना पक्राउ
इटहरी ।&nbsp;सुनसरीको ईटहरी उप-महानगरपालिका-१२ खनार चौकबाट लागूऔषध सहित २ जना पक्राउ परेका छन् । मंगलवार बेलुका ७ बजेको समयमा प्रहरी चौकी खनारबाट खटिएको प्रहरी टोलीले खनार चौकमा शंकास्पद तरिकाले हिडिरहेका ईटहरी-१० का १८ बर्षीय स�
केटीको विषयमा विवाद हुँदा सहकर्मीकै हत्या
पोखरा। पर्यटकीय नगरी पोखरामा मंगलबार अपत्यारिलो घटना भएको छ । &lsquo;भ्यालेन्टाइन डे&rsquo;को दुई दिनअघि केटीको विषयमा उत्पन्न विवादले &lsquo;इगो&rsquo; लिँदा १४ वर्षीय एक किशोरको घाँटी रेटी हत्या भएको छ । हत्या हुनेमा पाल्ला जिल्ला रम्भापान
छुरा प्रहारबाट इटहरीमा एक महिलाको मृत्यु
इटहरी । सुनसरीको ईटहरी उप-महानगरपालिका-४ माङहिङ टोलमा सोमवार साँझ छुरा प्रहारवाट १ महिलाको मृत्यु भएको छ । छुरा प्रहारबाट सोही स्थान बस्ने दिलु लिम्बुको घरमा डेरा गरी बस्ने वर्ष ३२ की सोनिया राईको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्
धरान घर भएका सेनाका जवान विपि गेट नजिक मृत फेला
धरान । धरान&ndash;१७ घर भएका नेपाली सेनाका जवान कुमार परियारको शव प्रहरीले सोमबार दिउँसो विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको दक्षिणी गेट नजिकै फेला पारेको छ ।हिले ब्यारेकमा कार्यरत परियार फुस्रेमा चलेको तालिम सकेर �
1496 पटक पढिएको
बुहारीले ढुंगा हान्दा ससुरा ठहरै
ओखलढुंगा । ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका-५ रुम्जाटारमा बुधवार राती आफ्नै बुहारीले ससुरालाई फलामको ढुंग्री प्रहार गर्दा ससुराको मृत्यु भएको छ । ढुंग्री प्रहारबाट सोही स्थान बस्ने बर्ष ७० को रामकाजी गुरुङको मृत्यु भएको जिल्
प्रकाशित मितिः माघ 25, 2075
प्रयोग गर्न ठिक्क पारेको लागुऔषध सहित एक युवा पक्राउ
धरान । सोमबार राती धरान&ndash;१८ स्थित शिव मार्गबाट एक युवालाई प्रयोग गर्न ठिक्क पारेको लागुऔषध सहित पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटेको प्रहरीको टोलीले धरान&ndash;१८ का सुनिल शाहीको शरिर तथा झोला खानतलासी गर्दा लागु
धरानबाट ब्राउन सुगर र २ माेटरसाइकल सहित ३ जना पक्राउ
धरान । धरान&ndash;६, पानवारी स्कुलडाडाबाट ब्राउन सुगर सहित तीन जना युवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।को १ प ९९३६ र को २५ प ९५०९ नं. को मोटरसाइकलमा आएका तीनजना युवालाई प्रहरीले लागु औषध ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको हो । पानवारी प�
2897 पटक पढिएको
जाेगवनीबाट लागूऔषध लिएर आँउदै गरेका धरानका ताम्राकार पक्राउ
धरान । मोरङको विराटनगर महानगरपालिका-१५ बाबा सिनेमा हल नजिकबाट प्रहरी आइतवार लागूऔषध सहिर १ युवकलाई पक्राउ गरेको छ । लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो विराटनगरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले साँझ ६ बजे सुनसरी धरान उप-महानगरपालिका-३ बस्ने बर्
पसलबाट मोबाइल चोर्ने पक्राउ
धरान । धरान&ndash;१२ स्थित एक पसलमा सामान किनेर सोही पसलको मोबाइल चोरी गर्ने एक युवक पक्राउ परेका छन् । धरान&ndash;७ बस्ने साहिल अन्सारीले धरान&ndash;१२ का रामबहादुर राईको मोबाइल चोरी गरेका थिए । आफ्नो मोबाइल चोरी भएपछि खोजीदिन आग्रह गर्दै
गाँजा सहित धरान डाँडा घाेपाबाट २ युवक पक्राउ
धरान । सुनसरीको धरान उप-महानगरपालिका-१७ डाँडा घोपा चोकबाट गए राती लागूऔषध गाँजा सहित २ युवकलाई पक्राउ गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गाँजा सहित धनकुटा साँगुरीगढी गाउँपालिका-९ बस्ने बर्ष २५ को राज
प्रकाशित मितिः माघ 20, 2075
कुटपीटबाट एक जनाको मृत्यु
संखुवासभा । सुखुवासभाको खाँदवारी नगरपालिका-६ पाङठामा मादक पदार्थ सेवन गरी झै-झगडा भई कुटपीट हुँदा १ जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ । शुक्रवार राती साढे ८ बजेको समयमा स्थानीय ४४ बर्षीय बम बहादुर न्यौपानेले मादक पदार्थ सेवन �